A/QASIM MIYAA XUKUMA BANDER QASIM?
BBC.MONITOR-05/01/02- Waxay qortay in nin u hadlay Carte uu sheegay in dawladda KMG ah ay mucaaradka ka difaaci doonto in ay qabsadaan Bosaso. Sidoo kale, ayaa Mudane Xasan Abshir waxaa isagana ka soo yeeray in la rabo in Bosaso la qabsado si ay ugu gogol-xaarto in la qabsado meelaha laga taageersan yahay Carte illaa iyo Xamar.
Marka waxaa isweeydiin mudan bal tolloow yaa A/qasim u difaacaya Bander Qasim?
Waxaan u maleeynayaa in ay arrintaas aadka u culus ay isku dayi doonaan daneystayaashii Carte ka qaybgalay sida :-
J.A.Jaamac ee haatan xukumiba-la' Bosaso uuna Madaxweynaha uu u yahay A/qasimka Kismayo iyo dhul kaleba xoogga ku heysta.
Nin uu Siyad Bare u magacaabay Suldaanimo si reer Nugaal loo kala qeybiyo xilligii SSDF, horayna u inkiray in reerka A/qasim ay Kismayo heystaan. Ninkaas isaga ahna oo ayaamahanba u dallacay qabqable dagaal!
Haraagii Itihaad ee PL oo uu madax u yahay ninka A/qasim isxigaan oo la yiraahdo Xasan Dahir Aweys oo hadda Wantedka u ah U.SA.
Waxaase hubaal ah in reer PL uusan xukumin A/qasimka xaq-darida wada, reer Puntlandana ay soo dhoweyn doonaan wax kasta oo lagu xoreynayo Kismayo iyo meelaha kale ee xoogga lagu heysto sida waxyaabaha hadda ka socda Bosaso ay tilmaanayaan.
Si kastaba ha ahaatee, reer Baydhabo ayaa waxay ku maahmaahaan, " LAN KAAGOOW (Shimbir baqtiga cuna) HOR DAREERSHEY NOQODI BAKHTI CUNAAW MA HURAAW ".
Sidaas darteedna waxaa hubaal ah A/qasim iyo kuwa uu hormoodka u yahayba in aakhirataanka bakhtiga la cunsiin doono maxaa yeelay -
Al-xaqu yaclaa walaa yuclaa caleehi.....